Famokarana antsasa-bolo - mpamatsy & orinasa Fividianana ao Shina
Marika CHECKEDOUT Item Code U3061D037049U Lehibe SAIZANA Teny miavaka chef antsasaky ny apron, canvas waiter apron, canvas apron Fabric 85/15 poly / cotton Fanjaitra Thread Polyester kofehy koa antsoina hoe kofehy avo lenta. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, ny fihenan'ny ambany, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia miorikorika amin'ny fanoherana, mateza amin'ny hetaheta, a ...
Fotsy vita amin'ny poleta fotsy volo any Waiter any aoriana any Apron U316S0200A
Marika CHECKEDOUT Item Code U316S0200A Fandraisana SAIZANA Teny miavaka amin'ny antsasaky, tadio mainty afovoany, apron'ny valahana, chef apron, waiter apron, apron an-dakozia 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu lava-paty, tsy misy pilling, tsy mihemotra, tsy misy kansera, serivisy fanompoana in-2 toy ny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny ...
Black Poly Cotton Waiter Long Waist Long Apron U316S0100A
Marika CHECKEDOUT Item Code U316S0100A Fandraisana SAIZANA Teny miavaka amin'ny antsasaky, tadio mainty afovoany, apron-joro, chef apron, waiter apron, apron an-dakozia 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu lava-paty, tsy misy pilling, tsy mihemotra, tsy misy kansera, serivisy fanompoana in-2 toy ny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny ...
Fotsy vita amin'ny poleta fotsy fotsy pataloha Favonosana vita amin'ny paosy U311S0200A
Marika CHECKEDOUT Item Code U311S0200A Fandraisana SAIZANA Teny miavaka amin'ny antsasaky, tadio mainty afovoany, apron'ny valahana, chef apron, waiter apron, apron an-dakozia 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu lava-paty, tsy misy pilling, tsy mihemotra, tsy misy kansera, serivisy fanompoana in-2 toy ny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny ...
Côte d'Izy mainty chef goavam-be aprily apon miaraka am-paosy U311S0100A
Marika CHECKEDOUT Item Code U311S0100A Fandraisana SAIZANA Teny miavaka amin'ny antsasaky, tadio mainty afovoany, apron-joro, chef apron, waiter apron, apron an-dakozia 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu lava-paty, tsy misy pilling, tsy mihemotra, tsy misy kansera, serivisy fanompoana in-2 toy ny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny ...
Grey Poly Cotton waiter Long Pavona Pomaika miaraka amin'ny poketra iray U306S0500A
Marika CHECKEDOUT Item Code U306S0500A Fandraisana SAIZANA Teny fototra apron misy am-paosy, waiter apron, aprona, antsasaky ny apron, chef apron Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu lava-taolana, tsy misy ondana, tsy mihemotra. tsy misy karazan-tsaboina, fotoam-panompoana in-2 toy ny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny tanjany avo, ...
Divay mena poleta voakaly any waiter any afovoany amam-baravarankely iray miaraka amin'ny kitapo iray U306S0400A
Marika CHECKEDOUT Item Code U306S0400A Lehibe SAIZY Teny fototra apron misy am-paosy, waiter apron, aprily mainty apron Fabric 65/35 poly / landy GSM.235g Xinjiang Aksu vita amin'ny landy lava, kitapo, ondana, tsy mihemotra, tsy misy karazan-dra, fanompoana in-2 toy ny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, abrasion tsara ...
Fotsy goavam-be poleta vita fotsy fotsy aponika Pona amin'ny kitapo iray U306S0200A
Marika CHECKEDOUT Item Code U306S0200A Lehibe SAIZAIZY teny fototra apron misy am-paosy, waiter apron, apron mainty, afovoany apron Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu vita amin'ny lava-bato, tsy-pilling, tsy mihemotra, tsy misy carcinogens , Ny fiainana serivisy dia in-2 toy ny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny tanjany avo, tsara ...
Black Poly Cotton Waiter Pavana lava afomikanina amin'ny kitapo iray U306S0100A
Ny marika CHECKEDOUT Item Code U306S0100A Fandraisana SAIZANA Teny fototra apron misy am-paosy, waiter apron, aprona mainty Fotsy 65/35 poly / landy GSM.235g Xinjiang Aksu vita amin'ny landy lava, tsy misy ondana, tsy mihemotra, tsy misy karazan-doha, fiainana fanompoana in-2 toy ny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, abrasion tsara ...
Fotsy vita amin'ny poleta fotsy fotsy eo am-baravarankely poleta mavokely miaraka amin'ny kitapo iray ary vonoan-kavoana U302S0100A-1
Marika CHECKEDOUT Item Code U302S0100A-1 habe ZAVATRA MISY TOKONY teny miavaka apron, waiter apron, aprona, antsasaky ny apela Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu vita amin'ny lava-paty, tsy-pilling, tsy mihemotra, tsy misy karazan-kasina, Ny fiainana fanompoana dia in-2 toy ny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny tanjany avo, tsara ny abrasion resista ...
Paolozy vita amin'ny poleta mainty waiter any afovoan'ny poma mavokely iray miaraka am-paosy iray ary kitapom-bokatra T30el U302S0100A-1
Ny marika CHECKEDOUT Item Code U302S0100A-1 Fizarana SAIZITRA Teny fototra apron, waiter apron, aporo mainty Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu landihazo lava volo, tsy mi-pilling, tsy mihemotra, tsy misy karazan-jaza, life service in-2 toy ny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, ...
Grey loko poloney loko Waiter Lavona lava afrikanina U302S0500A
Marika CHECKEDOUT Item Code U302S0500A Lehilahy SAIZY Teny fototra apron, waiter apron, apron mainty Fabric 65/35 poloney / landihazo GSM.235g Xinjiang Aksu landihazo lava taolana, tsy misy ondana, tsy mihemotra, tsy misy kansera, asa fanompoana no 2 fotoana toy ny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, lo ...